Las Vegas: Boogta aan waligeed bogsanayn & tacsida aan dhammaan ee hubka Maraykanka – Kasmo Newspaper
Las Vegas: Boogta aan waligeed bogsanayn & tacsida aan dhammaan ee hubka Maraykanka
Updated - October 3, 2017 6:29 am GMT
London (Kasmo), Iyada oo wali la raadinayo sidii loo fahmi lahaa wixii Las Vegas ka dhacay, (geerida 59, dhaawacuna 527), khalad ma ahan haddii la si weydiiyo goorta Maraykanku ka waantoobi doono hubka iyo rasaasta lagu iibiyo suuqyada dalka.
Waxaa show adkaan lahaa masiiboooyinka oo meesha ka bixi lahaa, amaba marar dhif ah dhici lahaa, waxaana sii raaci lahaa xanuunnada dhimirka,midabtakoorka iyo kala qaybsanaanta siyaasadda.
Dalka Maraykanka waxaa ku sugan 300 oo malyuun oo hub ah, ama in ka badan 1 qori qofkiiba, oo isugu jira bastoolado, boobayaal culus, qoryo kale oo darandoorri ah, kuwaas oo loogu talagalay goobaha dagaalka, dad gaaraya 30,000 ayaa sannadkii u geeriyooda isticmaalka hubkaas.
Samaynta iyo ganacsiga hubka waxaa sharci ka dhigaya qodobka 2aad “Amendment II” ee wax ka beddelka Dastuurka oo muwaadiniinta u siinaya xaqa haysashada hubka, laakiin caqliyadda uu ku fadhiyo mar hore laga soo gudbay.
Waayo sababtii aabayaashii asaasay Amerika ugu soo dareen Dastuurka waxay ahayd cabsi ay ka qabeen Britain, oo horey u gumaysan jirtay, in ay dib u qabsato. Laakiin cid waliba waa u caddahay in Boqorad Elizabeth II hadda qorshaynayn in Maraykanka lagu duulo, sidaa darteed xeerka “Second Amendment” ma taallo baahi uu u sii jiro.
Sabab kale oo muddadaas dheer ku soo biirisay in la sharciyeeyo haysashada hubka waxay ahayd fowdada ku baahsanayd dalka oo idil: Gobollo badan, sida “Far West” ereyga “Sharci” wuxuu ahaa mid cid waliba sidii ay doonto u fasirato.
Sidaa darteed qof waliba wuxuu u baahnaa hub uu isku difaaco, wuxuuna daliishanayay “Second Amendment”, si uu u soo iibsado una haysto.
Taas qudheeda meesha waa ka baxday oo in kasta oo Amerika tahay wali dal mar kasta qasan, dhowrista sharciga waxaa dammaanad qaaday Hay’adaha amniga, sida Boliska Federalka, FBI iyo kuwa Maamullada oo magaalo kasta jooga.
Dadweynuhu uma baahna in ay is hubeeyaan, si ay isu difaacaan, waliba amni ayay dareemi lahaayeen haddii ayan jirin bastooladaha iyo qoryaha galaya gacmaha dadka waalan iyo dambiilayaasha. Waxaa la is weydiinayaa sababta iyo haddii nin 64 jir ah, sida Stephen Paddock, loogu oggolaa in uu haysto tobaneeyo qori, in uu sifo sharci ah ku iibsaday iyo in uu daba maray sharciga?
Soo-saarayaasha hubka waxay durba ku doodi doonaan in xeerarka xadaynta hubka ee hadda jira ku filanyihiin, laakiin an loo hirgalin sidii la rabay, ha yeeshee dooddaasi waxay difaacaysaa oo qur ah danahooda dhaqaale. Waayo haddii hubka gabi ahaanba la mamnuuci lahaa, looma baahdeen in laga hadlo arrimahaan.
Xaqiiqdu waxay tahay in kooxaha qalqaalada awoodda badan (Lobby) ee shirkadaha hubka sameeya “National Rifle Association” uu ka xoog badanyahay siyaasiyiinta qudhooda, gaar ahaan kuwa Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga qaarkood.
Madaxweynihii hore, Barack Obama, wuxuu isku deyay in uu ganacsiga hubka xadeeyo, ka dib xasuuqyo meelo kala duwan oo dalka gudihiisa ah ka dhacay, laakiin xitaa geerida intaas oo dad ah oo waxba galabsan ma noqon mid furfurta doodda hubka.
Maamulaha cusub ee Aqalka Cad, Donald Trump, wuxuu taageersanyahay, si aan xad lahayn, Qodobka “Second Amendment” ee Dastuurka, wuxuuna ka gaabsaday xitaa in uu khudbaddii tacsida Las Vegas ku soo qaado.
Waayo haddii uusan difaacin wuxuu lumin doonaa doorashooyinka soo socda, sidaa darteed, Maraykanka, qofkii raba in uu waddada wax ku dilo, wuxuu sii haysanayaa fursad iyo xuquuq uu ku iibsado hubkii uu wax ku xasuuqi lahaa.